DMAA မစတင်မီသင်သိထားသင့်သည့်အရာ (၁၀) ခု AASraw
DMAA မစတင်မီသင်သိထားသင့်သည့်အရာ (၁၀) ခု
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/ DMAA မစတင်မီသင်သိထားသင့်သည့်အရာ (၁၀) ခု
အပေါ် Posted 11 / 28 / 2018 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
DMAA ဆိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အဆီများလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ကာလတိုမှတ်ဥာဏ်နှင့်တုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်မှုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသည့်ဖန်တီးထားသောဆေးဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် DMAA သောက်သုံးသောအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ၁.၃-dimethylamylamine ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါ ၀ င်သည်။
နားလည်မှု ဘာ is DMAA အားကစားသမားတိုးမြှင့်သည့်မည်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်မဆိုအားဖြည့်ရန်မဆင်းမီအလေးပေးသင့်သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ DMAA သည်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ dimethylamylamine အတွက်တိုတောင်းသောသဘာဝဖြစ်ပြီးယခင်ကသဘာဝ geranium ဆီမှထုတ်ယူသောဆေးဖြစ်သည်။ သို့သော်သုတေသနမှတစ်ဆင့်၎င်းကိုထူထောင်ခဲ့သည် ၁၊ ၃ dimethylamylamine ဓာတုဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ထုတ်လုပ်သည်။
ဒါ့အပြင် 1,3 DMAA လို့လည်းခေါ်တယ်၊ ဒီဆေးဟာဂျာမေနီယမ်ထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးတွေနဲ့ဆင်တူတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်လူအများစုက DMAA သည်မူးယစ်ဆေးဝါးတူညီသောလူတန်းစားနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်. DMAA အကြိုလေ့ကျင့်ခန်းသည်အသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုသူများနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူသည်။ ၎င်းကိုခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်လိုသူများကအဓိကအသုံးပြုသည်။
DMAA အမှုန့်ကို ၁၉၄၄ တွင် Eli Lilly နှင့် Company မှပထမဆုံးအကြိမ်ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုနှာခေါင်းအစိတ်ကျရောဂါအဖြစ်ဆေးဝါးတွင်များစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ephedrine နှင့် pseudoephedrine အသုံးပြုမှုနှင့်အလားတူရလဒ်များကိုတွေ့ရှိရန်တွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်အဆိုပါဆေးကိုဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အစပိုင်းမှာလူအများစုက DMAA ကိုနှင်းဆီ geranium ဆီမှရရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီအမြောက်အများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည် DMAA ဖြည့်စွက် ထိုကဲ့သို့သောအမြစ်များနှင့်ပင်စည်ကဲ့သို့နှင်းဆီ geranium စက်ရုံအစိတ်အပိုင်းများ၏ရုပ်ပုံများကိုညွှန်း။ သို့သော်ဤယုံကြည်ချက်သည်ကြာရှည်စွာတည်ရှိနေခဲ့သော်လည်း DMAA အပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများသည်မဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဒါဟာ DMAA ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဓာတုဗေဒရရှိသောကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးထိုသို့ကြာမြင့်စွာယုံကြည်သည်ကဲ့သို့သဘာဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးကွက်သို့ပထမဆုံးအကြိမ်မိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက်အားကစားသမားများက၎င်း၏ရလဒ်များကိုအထင်ကြီးစေသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအကြီးအကျယ်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဤသည်ဖြည့်စွက်စျေးကွက်ကနေဖယ်ရှားခဲ့သည်သည့်အခါ 1983 သည်အထိဖြစ်ခဲ့သည်။
အများပြည်သူဆေးဆိုင်များတွင်ရောင်းရန်လုံခြုံမှုမရှိကြောင်းပြောဆိုမှုများကြောင့်ထုတ်ယူခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီပိတ်ပင်မှုကမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာရောင်းနေတုန်းမှာမူးယစ်ဆေးရှားပါးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ Geranamine အမည်အသစ်ဖြင့်ကုန်သွယ်သည့်အခါ DMAA ဖြည့်စွက်စာကိုအများပြည်သူရောင်းချခြင်းကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။
DMAA ဖြည့်စွက်စာကိုသာရောင်းချခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစားသူကကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်များတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်နှင့်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်။ အများပြည်သူဓာတုဗေဒပညာရှင်များ၌မူးယစ်ဆေးဝါးကိုပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်အားကစားသမားအားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏လုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုအငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်
အဆိုပါစိုးရိမ်မှုများမှာအလွန်အရေးကြီးသည့်အတွက်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (FDA) သည်ဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်သူများကိုစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိစေဘဲအသုံးပြုရန်သင့်တော်ကြောင်းသက်သေပြရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကနေဒါကဲ့သို့သောနိုင်ငံများသည်လည်း၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး၎င်းအားပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။
အားကစားသမားများသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်အသုံးပြုရန်လည်းအန္တရာယ်ကင်းသည်။ World Anti-Doping Agency ကမကြာသေးမီက၎င်းကိုအသုံးပြုရန်တားမြစ်ထားသောအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းအဖြစ်စာရင်းပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေသည့်အားကစားသမားတစ် ဦး သည်အပြိုင်အဆိုင်အားကစားများတွင်ပါဝင်ခြင်းကိုတားမြစ်ရန်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအငြင်းပွားမှုများကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်တွင် DMAA အားတားမြစ်ထားသည်။
ဖြည့်စွက်ဆေးကိုစစ်သုံးစတိုးဆိုင်များမှ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ နယူးဇီလန်တွင်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းကိုလက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တရားမ ၀ င်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
DMAA ၏အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောယန္တရားကိုသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော်၎င်းဆေးသည်သဘာဝ adrenaline ၏တုန့်ပြန်မှုကိုတုပရန်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသည်နှင့် DMAA သည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးကိုကဖင်းဓာတ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်စေသောမြင့်မားသောစိတ်ကြွဆေးများထုတ်လုပ်သည်ဟုလူသိများသည်။ သို့သော် DMAA ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ကဖိန်းဓာတ်နှင့်ကွဲပြားသည်။ သောက်သောအခါ DMAA သည် noradrenaline ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့မှုကာလအတွင်းတက်ကြွစေသောဟော်မုန်းဖြစ်သည်။
ဒီဟော်မုန်းကိုကျောက်ကပ်အထက်တွင်တွေ့ရသော adrenal glands တွင်စုစည်းထားသည်။ လွှတ်ပေးလိုက်သောအခါ, သွေးထဲတွင်ဟော်မုန်းဖြန့်ဝေသည်, ဤသည်နှလုံးခုန်နှုန်းတိုးမြှင့်စေသည်။
noradrenaline ထုတ်လုပ်မှုသည်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်အားဂလူးကို့စ်သိုက်မှဂလူးကို့စ်ကိုထုတ်လွှတ်ရန်လှုံ့ဆော်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများအတွင်းရှိစွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေပြီး၊ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီအားကစားသမားအများစုကအလိုရှိသည်။ DMAA ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အချိန်မီတုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့သောအချို့သောကဏ္improvementများတွင်အချို့သောတိုးတက်မှုများကို ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်။
ဤသည်လေ့ကျင့်ခန်း session တစ်ခုမစတင်မီ DMAA အားကစားသမားများအားကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားကစားသမားသည်ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကိုသုံးစွဲမည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်လိုသောကြောင့်ဤမူးယစ်ဆေးသည်စွမ်းအင်မြင့်မားသည့်ခံစားချက်ကိုပေးသည်။ DMAA ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အားကစားသမားများကိုများသောအားဖြင့်အသုံးပြုသောကဖိန်းဓာတ်ပါသောစွမ်းအင်ခံစားမှုမှကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။
DMAA သည်ကဖိန်းဓာတ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးယင်းကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုသူများသည်စွဲလမ်းမှုကိုစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုထိန်းချုပ်ထားအသုံးပြုမှုအလွန်အရေးကြီးသည်ဆိုလိုသည်။ အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည် ဦး နှောက်ကိုကြီးမားသောစွမ်းအင်တိုးမြှင့်မှုကိုခံစားစေသည်။
ဒီသွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက် ဤလုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်လူများစွာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအလွဲသုံးစားပြုလေ့ရှိသည်။ သို့သော်အားကစားသမားအချို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအသုံးပြုကြသည်။ အောက်ဖော်ပြပါများမှာ DMAA ၏ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုမှုအချို့ဖြစ်သည်။
AASraw သည် DMAA ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ပိုလျှံသောအဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလိုရှိသည်ထက်နှေးနှေးနှုန်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အားကစားသမားများမှဖြည့်စွက်ဆေးကိုအသုံးပြုသည်။ များသောအားဖြင့်ဤဖြည့်စွက်ဆေးအချို့သည်စတီးရွိုက်များဖြစ်သည် Nootropics.
ထိုကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်ဆေးများအသုံးပြုမှုသည်မီးလောင်ရာနှုန်းကိုလုံလောက်စွာတိုးတက်စေသည်။ DMAA သည်ပိုလျှံသောအဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေသောအခြားလူသိများသည့်ဖြည့်စွက်ဆေးများနည်းတူထိရောက်မှုရှိသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်အများစုသည်ရလဒ်များစွာရရှိရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှအဓိကအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်၏မလိုလားအပ်သောဆွဲဆောင်မှုရှိသောခန္ဓာကိုယ်အဆီများများလျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်။
အလွန်အကျွံအဆီများသည်အားကစားသမားကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက်သွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။ ၎င်းဖြစ်ပျက်သောအခါသွေးထဲတွင်အောက်စီဂျင်အနည်းဆုံးစီးဝင်ပြီးလူတစ်ယောက်၏အထွေထွေလုပ်ဆောင်မှုကိုအလွန်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ယခုအခြေအနေမျိုးကိုရှောင်ရှားရန်သော့ချက်မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်အားစွမ်းအင်မြင့်မားသော DMAA ကဲ့သို့သောဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်ပြည့်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်အသုံးပြုသူသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အဆီဓာတ်များကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။ , ဤသည်အထူးသဖြင့် offseason ဖြတ်တောက်ခြင်းကာလအတွင်းဒီအောင်မြင်ရန်လိုသူအားကစားသမားများအတွက်အရေးကြီးပါသည်။ ဆေး၏ထိရောက်မှုသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောကဖိန်းဓာတ်ကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူတွဲဖက်သောအခါ, DMAA ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှု 35% ခန့်တိုးတက်စေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကအဆီလောင်ကျွမ်းမှုနှုန်းကိုသိသိသာသာများပြားစေခြင်းဖြင့်တိုးတက်စေသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသေချာခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ် အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို ခန္ဓာကိုယ်ကသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပျက်ရန်အချက်ပြမတိုင်မီအစောပိုင်းက။
DMAA ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ဗဟို ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုရှိသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်၎င်းလုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်သောအရှိန်ဖြင့်အစပျိုးပေးသည်။ လှုံ့ဆော်မှုတွင် CNS သည်အဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည့်ကွင်းဆက်ဓာတ်ပြုမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် DMAA ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအခြားထိပ်တန်းအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြည့်စွက်ချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာအရေးအကြီးဆုံးအရာကတော့စွမ်းအင်ပါ။ ဒါကြောင့်မင်းကမင်းကိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ဒီစွမ်းအင်တွေစုဆောင်းပေးနိုင်တာကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်။ Mesomorph ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်း dmaa
ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်သူအားသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းကိုအောင်မြင်စေရန်သင်လိုအပ်သည့်သင့်တော်သော ဦး ခေါင်းကိုပေးရမည့်အရာဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းကစာတန်းများအရမူးယစ်ဆေးဝါးသည် Pseudoephedrine နှင့်ဆင်တူသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြသည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူကို 'high' mode သို့ရောက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လေးလံသောအလေးမအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပမာဏတစ်ခုအားပေးသည်။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မပြုလုပ်မီစွမ်းအင်မြင့်မားသောဆေးကိုသောက်သုံးသင့်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအားအားကစားသမားများအားစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်စွမ်းအားမြင့်မားစေသည့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းသည်သူတို့၏နေ့ရက်များကိုမှတ်သားထားရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့သောဆေးသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏သဘာဝဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကိုလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
စားသုံးပြီးနောက်ဆေးသည် vasodilation ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ၎င်းသည်လေထုထဲတွင်အပူလွန်ကဲသောအခါပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးပြန်ကြောများ၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပြုပါသည်။ ၎င်းသည်အအေးခံရန်အတွက်အရေပြားမျက်နှာပြင်သို့သွေးများပိုမိုသယ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးသည့်ဆေးများတွင်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ပါ ၀ င်ပြီးသွေးကြောများသွေးကြောများသွေးကြောများတိုးချဲ့ခြင်းကိုတိုးပွားစေသည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်တစ် ဦး စဉ်အတွင်းအားကစားသမားများအတွက်ထပ်တိုးအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ် Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်း။ ကြီးမားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သွေးများသယ်ဆောင်ရန်မျက်နှာပြင်areaရိယာသည်အလွန်မြင့်မားလာသည်။
သို့သော်ဤအရိုအသေအပေါ် DMAA အသုံးပြုမှုသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေသောဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ လူအများမျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့ vasodilation တိုးမြှင့်မည့်အစား DMAA သည်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသည်။ ၎င်းသည်လေထုအတွင်းရှိအပူချိန်များနိမ့်ကျသည့်အချိန်များ၌တွေ့ရလေ့ရှိသော vasoconstriction ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအချိန်မျိုးတွင်ကိုယ်ခန္ဓာသည်၎င်း၏အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရုန်းကန်နေရပြီး၎င်းသည်အရေပြားမျက်နှာပြင်မှသွေးထုတ်ယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သောက်သုံးမှုအလွန်မြင့်မားပြီး DMAA ကိုသောက်ရန်စီစဉ်နေသူကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။
လူတိုင်းသူတို့လိုအပ်သမျှကိုမှတ်မိချင်ကြသည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်လူအများအပြား၏ဘဝများ၌ဖြစ်ပျက်ရန်ခက်ခဲသောအဖြစ်အပျက်များကြောင့်ကြုံတွေ့ရလေ့မရှိပါ။ DMAA သည်ဤရှေ့မျက်နှာစာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒီဖြည့်စွက်မှု၏အသုံးပြုသူများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုများအရပါဝင်သူများသည်၎င်းကိုမသုံးစွဲမီတိုတောင်းသောကာလတိုမှတ်ဉာဏ်ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လူအများစုက၎င်းကိုရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏စားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်များစွာသောသူတို့သည် DMAA ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောအဓိကအကျိုးကျေးဇူးများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏အစီအစဉ်မရှိပဲဖြစ်ပျက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
High reflex action သည်အားကစားသမားများစွာတွေ့ကြုံခံစားလိုသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ DMAA ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလွန်သတိရှိစေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ DMAA အသုံးပြုသူများသည်အထူးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုနှင့်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပိုမိုလှုပ်ရှားသည်။ ဒီဆေးဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှုန်းကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ဖြစ်စဉ်များကိုပုံမှန်ထက်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအရာသည်အလွန်တက်ကြွ။ သတိရှိသူတစ် ဦး ရှိခြင်းအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤမျက်နှာစာတွင်တစ်ခုတည်းသောချေမှုန်းခြင်းမှာပြိုင်ဆိုင်မှုများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုတားမြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်အားကစားလေ့ကျင့်စဉ်ကာလအတွင်း reflex လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်မပြုပါ။ အားကစားသမားများအားရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အမြန်နှုန်းတိုးတက်စေရန်အတွက်သို့သော်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤသည်ယှဉ်ပြိုင်ဂိမ်းတွင်ပါဝင်သူမည်သူမဆိုများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်သင့်သည်။ ကမ္ဘာ့မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့မှအသုံးပြုရန်မသင့်တော်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအနက်မှထိုဆေးကိုစာရင်းသွင်းထားသည်။ များစွာသောအခြားအဖွဲ့များသည်အထူးသဖြင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် DMAA အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်ဤအကြောင်းအရာသည်မတူညီသောအမြင်များကိုဆွဲဆောင်သောခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။
ယူအက်စ်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (FDA) အေဂျင်စီက DMAA ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုလူသားစားသုံးမှုအတွက်အန္တရာယ်မကင်းဟုယူဆသည်။ အဆိုပါအေဂျင်စီကအသုံးပြုရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောမူးယစ်ဆေးဖြစ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် DMAA ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်မရှိပါဟုငြင်းဆိုသည်။ အေဂျင်စီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လူကိုမူးယစ်ဆေးဝါးကိုကုန်ကျစရိတ်မည်မျှသုံးစွဲရမည်ကိုအကြံပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
FDA ၏အဓိကစိုးရိမ်မှုတစ်ခုမှာမူးယစ်ဆေးဝါး၏ vasoconstriction ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့ကစောဒကမတက်လျှင်အများအားဖြင့်သေစေနိုင်သည်။ အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ DMAA ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အသက်ရှူရသည့်အခက်အခဲများ၊ နှလုံးရောဂါနှင့်အတက်အကျများခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
FDA ၏အဆိုအရမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့်အဓိကအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းကြောင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သွက်ချာပါဒသာမကအခြားဆိုးဝါးသောဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
FDA သည်စျေးကွက်အတွင်းမှဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများဖြည့်စွက်ထားသော DMAA အားဖြည့်တင်းရန်သေချာစေရန်အလွန်ဒဏ်ခံခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးဓာတုဗေဒဆေးဝါးများအားဖြည့်စွက်ပါ ၀ င်သည့် DMAA ရောင်းချခြင်းမှနွေးထွေးစေသည့်အက္ခရာများကိုထုတ်ပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်ဆေးများကိုစင်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိပါကအေဂျင်စီသည်ရောင်းသူများအား၎င်းတို့အားဖျက်ဆီးပစ်ရန်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများထံမှအခြားအမှာစာမပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုသည်။
ယခုအချိန်အထိများစွာသောကုမ္ပဏီများလိုက်နာပါပြီ။ ဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီး၊ DMAA ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုရောင်းအားအလွန်နည်းပါးသောကြောင့်အပြည့်အ ၀ အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် FDA မှရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုခံရပြီးနောက်၌ပင်အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် DMAA ကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ကြသည်။
USPLabs ဟုခေါ်သောကုမ္ပဏီသည်ဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအမှုများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ FDA သည်သူတို့၏လုပ်ငန်းများကိုရပ်တန့်သွားစေပြီး၊ ကုမ္ပဏီသည်ဈေးကွက်ထဲရှိကုန်ပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးပစ်ရသည်။ သူတို့၏စီမံကိန်းလက်လီတန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၈ သန်းဖြစ်သည်။
ဤအချက်ကအေဂျင်စီသည် DMAA ဖြည့်စွက်ဆေးထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ရန်သေချာစေရန်မည်မျှဝေးကွာစွာသွားရန်ဆန္ဒရှိသည်ကိုပြသသည်။ အလားတူမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်မျိုးတည်းသာတိုင်းပြည်၏နိုင်ငံသားများကိုမသွားနိုင်ကြောင်းပြသသည်။ စားသုံးသူများအနေဖြင့် DMAA ကိုသုံးစွဲနေသည်ကိုမသိရှိစေရန်ထုတ်လုပ်သူများအသုံးပြုနိုင်သည့်နာမည်အမျိုးမျိုးကို FDA ကထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်သည်။ သုံးစွဲသူများမှတားမြစ်ထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးကိုတိုက်ရိုက်ဖော်ထုတ်ခြင်းမှတားဆီးရန်ကုမ္ပဏီများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလျှို့ဝှက်အမည်များဖြင့်ထုတ်လုပ်နေကြောင်းအေဂျင်စီကသိမြင်ပြီးနောက်
နာမည်ပျက်စာရင်းအချို့တွင် Geranamine နှင့် Methylhexanamine တို့ပါဝင်သည်။ အခြားကုမ္ပဏီများကဖြည့်စွက်သည် Geranium အပင်ထုတ်ယူမှုပါဝင်သည်။ ဤသည် DMAA ၏ရှေ့မှောက်တွင်တစ်ခုညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Geranium မှထုတ်ယူမှုများပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်ဖြည့်စွက်မှုမျိုးကိုမဆိုသတိထားရမည်ဟု FDA ကသတိပေးသည်။
ကန့်သတ်ချက်များသည်ကနေဒါနှင့်နယူးဇီလန်ကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားသူများနှင့်ဆင်တူသည်။ အားလုံးစိုးရိမ်သောကသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ doping ဆန့်ကျင်ရေးအေဂျင်စီကလည်းစာရင်းပြုစုထားပါတယ် DMAA အမှုန့် လူ့သုံးစွဲရန်အန္တရာယ်ရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးများအကြားတွင် ဆိုလိုသည်မှာကမ္ဘာ့ဖလားကဲ့သို့သောပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်သောအားကစားသမားများအသုံးပြုရန်တားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အချို့ပြိုင်ပွဲများတွင်အထူးသဖြင့်ခွင့်ပြုထားသည့်အဆင့်အတွင်းရှိဆေးညွှန်းနိမ့်များတွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ သို့သော်ပြိုင်ဆိုင်မှု၏ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြtroubleနာတက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးမသောက်သုံးမီတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည့်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်းသေချာသည်။
FMA နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများအကြားတွင် DMAA သည်လုံခြုံမှုရှိမရှိခေါင်းစဉ်မှာနောက်တကြိမ် ထပ်မံ၍ တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည်နေဆဲမူးယစ်ဆေးဝါးဖြည့်စွက်ရောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အန္တရာယ်မရှိခဲ့ပါကြောင်းအလေးအနက်ဆိုသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအရ DMAA သည်အမှန်တကယ် Geranium စက်ရုံ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း FDA ကဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
သို့သော်အေဂျင်စီအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအတုပြုလုပ်ထားကြောင်းထောက်ခံပြောဆိုခြင်းကိုသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဒီဖြည့်စွက်ဆေးကိုအသုံးပြုရန်မလုံခြုံမှုရှိကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ၏အဆိုအရပုံမှန်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုပုံမှန်အသုံးပြုသောကျန်းမာသန်စွမ်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်မည်သည့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမျှမမျှော်လင့်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီဖြည့်စွက်ဆေးများတွင်တွေ့ရသည့် DMAA ပမာဏသည်လူသားများအတွက်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်ဟုဆေးကုသသူများကဆိုခဲ့သည်။
အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုတွင်ပါတီများအတွင်း DMAA ကိုလှုံ့ဆော်သူအဖြစ်အသုံးပြုသောလူငယ်များသည်ဘုံရောဂါ၊ ဦး နှောက်လေဖြတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤသည်ထပ်မံဖြည့်စွက်များတွင် DMAA ကိုအသုံးပြုခြင်း၏လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်။ FDA ကရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုပိုမိုအားကောင်း။ သို့သော်အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအရ FDA ၏အထောက်အထားများကိုအပိုင်းအစများသို့ဖျက်စီးပစ်လိုက်သည်။ ထိုလူငယ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းတို့တွင်ဆေးပြား ၆၀၀ မီလီဂရမ်ခန့်ပါ ၀ င်ကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်မြင်ကွင်း၌ကဲ့သို့မြင့်တက်ခဲ့ပြီးမျှော်မှန်းထားသောပမာဏမှာဖြည့်စွက်ဆေးတစ်လုံးလျှင် ၆၀ မီလီဂရမ်ခန့်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာထိုလူငယ်များသည်၎င်းတို့ယူခဲ့သည့်ပမာဏ၏ဆယ်ဆလောက်စားသုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်သိပ္ပံနည်းကျရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သင့်တော်သောဆေးများကိုသင့်လျော်သောဆေးများသောက်လျှင်၎င်းဆေးကိုကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားသောဆေးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ DMAA ကို ၇၅ မီလီဂရမ်ထက်ပိုမိုသောဆေးများဖြင့်သောက်ပါကသွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်မှုသည်မလိုလားအပ်သောအဆင့်အထိမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးယင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဒီဆေးကိုအရင်တုန်းကသွေးပေါင်ချိန်သိပ်မရှိသူတွေကသာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင် FDA သည်မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီများကလက်မခံသော်လည်း DMAA အသုံးပြုမှုလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၄ င်းတို့၏စိုးရိမ်မှုများကိုရှုတ်ချပြီးအနက်ရောင်စျေးကွက်မှဖြည့်စွက်ဆေးများကိုဆက်လက်ဝယ်ယူရန်မသင့်လျော်ပါ။ DMAA အကြိုလေ့ကျင့်ခန်းမှုန့်မသုံးမီဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အားကစားသမားအားမြှင့်တင်ပေးသည့်မည်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်မဆိုအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းအကြိုမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ် DMAA ကိုမဆုံးဖြတ်ခင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသင့်ကြောင်းအချက်အလက်များစွာရှိသည်။ ဤအရာအချို့သည်တ ဦး တည်းကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်၎င်းမှအသုံးပြုခြင်းမှသင်ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများပါ ၀ င်သည်။
သင်သိရန်လိုအပ်သည့်အရာများအနက်အဓိကအားမှာဤဆေးကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာကိုကင်းနှင့်မက်သာဖီတမင်းသုံးပြီးနောက်ကြုံတွေ့နိုင်သည့်အရာနှင့်ဆင်တူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစွဲအားကြီးထွားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေသည်အလွန်မြင့်မားသည်ဟုဆိုကာ၎င်းသည်အင်အားအရှိဆုံးလူသိများလှုံ့ဆော်သူတို့တွင်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းကိုတိုးတက်စေရန်ကြိုးစားစဉ်တွင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအားအပြင်းဆုံးစွဲလမ်းမှုတစ်ခုသို့ဖွင့်ပေးနေကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။
စွဲလမ်းမှုအခွင့်အလမ်းများကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်အကင်းဆုံးဆရာဝန်ကယုံကြည်သည်ကိုတိတိကျကျလိုက်နာရန်သေချာသင့်သည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ DMAA သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလွန်အမင်းနိုးကြားနေစေသည့် CNS ၏လက်ခံမှုနှုန်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အလားတူပြုမူသည်။
အဆိုပါဆေးသည်ကဖိန်းဓာတ်ထက်ပိုမိုအားကောင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်အားစွမ်းအင်ပြည့်ဝစေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်အထိခိုက်မခံနိုင်သောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုသို့တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးသောကြောင့်သင်စားသုံးသည့်ဆေးပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်လူငယ်အုပ်စုတစ်စုသည်ပါတီအစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
သူတို့ကတစ်ကြိမ်သောက်သုံးရန်လိုအပ်သောအရာထက်ဆယ်ဆပိုများသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအလျင်အမြန် 'မြင့်မားသော' ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သူတို့၏ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးသည်သူတို့၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပြီးအများစုမှာ ဦး နှောက်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်သေစေနိုင်သောရောဂါဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လည်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်သောအခြားကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်မတူသည်မှာ DMAA သည်သွေးပြန်ကြောများ၏သွေးကြောများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ DMAA ဆေးပြားကိုသောက်သုံးသူသည်အခြားသူများထက်သွေးကြောများကျုံ့သွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားသည့်ပြhasနာရှိသူတစ် ဦး ဦး သည်ထိုရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သောကြောင့်ဤအခြေအနေသည်ဆိုးဝါးနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားသောလူတစ် ဦး သည် DMAA ကိုမသုံးစွဲသင့်ပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသည်သွေးစီးဆင်းမှုကိုမြင့်မားစေပြီးစွမ်းအင်မြင့်မားလာသည်။ ဖြည့်စွက်ဆေးကိုအခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အားသင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သောကြီးမားသည့်စွမ်းအင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ DMAA သည်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးမပြုသင့်သောအကြိုလေ့ကျင့်ခန်းများဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
DMAA ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်း နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
DMAA ကိုသောက်ပြီးနောက်အချို့လူများသည်ပျို့အန်ခြင်းနှင့်အော့အပါအဝင်လေ့ကျင့်ခန်းအကြိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအပျက်သဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်အန်ခြင်းနှင့်ပျို့ချင်ခြင်းမှာ DMAA အသုံးပြုမှုကြောင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းဓာတုပစ္စည်းသည်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည့်ဖြည့်စွက်စာများ၌ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့သည်အော့အန်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အပြင်, အခြား Pre- လေ့ကျင့်ခန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့သော DMAA အဖြစ်စိတ်ကြွဆေးများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူဘုံဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင် -
များသောအားဖြင့်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုအသုံးပြုခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသူများ၏အမျိုးအစားများဖြင့်လာသည်။ ၎င်းတို့တွင်နို့တိုက်မိခင်များနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူများပါဝင်သည်။ နောက်ကွယ်တွင်အကြောင်းပြချက်မှာကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသည်မမွေးသေးသောကလေးငယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်လူအုပ်စုများအတွက်ဖြည့်စွက်မှုများစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များစွာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီနှင့်ပတ်သက်။ အလွန်ရှားပါးသတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် DMAA ကိုလေ့ကျင့်ခန်းအကြိုမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားပြီးကိုယ် ၀ န်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်ကျွေးသူများသည်မျှော်လင့်ထားသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်မျှသာရှိသောကြောင့်ယင်းကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူကိုသူတို့တစ်ခါမျှမစဉ်းစားဖူးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းထက်လုံခြုံသောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
DMAA ဆေးကိုလှုံ့ဆော်သူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အန္တရာယ်ကင်းသောခွဲစိတ်ကုသမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုအထူးသဖြင့်ခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီပြုလုပ်သောအခါတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားခွဲစိတ်ကုသရန်ခွဲထားပါက၎င်းကိုမသုံးရန်အကြံပြုသည်။
ခွဲစိတ်မှုမပြုမီမည်သည့်စိတ်ကြွဆေးကိုမဆိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ ဤသည်ခွဲစိတ်ကုသနေစဉ်အတွင်း fatal မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည် DMAA ကိုသုံးသောလူတို့နှင့်ထပ်တူထပ်မျှထင်ရှားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်လှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ဤအတန်းအစား၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အထူးသဖြင့်အလွဲသုံးစားလုပ်သည့်အခါသွေးပေါင်ချိန်ကိုမြင့်မားစေသည်။ DMAA သည်သွေးကြောများကိုကျဉ်းစေပြီးသွေးသည်ပုံမှန်ထက်မြန်သောနှုန်းဖြင့်သွေးစီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့် DMAA ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားဆိုးရွားသည့်နာမကျန်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤလက္ခဏာပြပါကအသုံးပြုသူသည်ချက်ချင်းဆေးမသုံးစွဲသင့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုတိုးစေပြီးသေစေနိုင်သည်။
သို့သော်သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းချုပ်ထားသောစားသုံးမှုဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။ သင့်လျော်သောသောက်သုံးသောပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်ဆေးစစ်ရန်ဆရာဝန်တစ် ဦး ကကူညီပေးလျှင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်။
DMAA ၏အုပ်ချုပ်မှုလမ်းကြောင်းသည်ပါးစပ်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းကိုအသုံးပြုပါကသုံးစွဲသူ၏သွေးစီးဆင်းမှုသို့ရောက်ရန်မိနစ် ၈ မိနစ်ခန့်ကြာလိမ့်မည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးအများစုတွင်သက်တမ်းဝက် (half-life) ကာလဟုခေါ်သည့်အရာများရှိသဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုချက်ချင်းခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအချိန်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုပြိုကွဲပျက်စီးစေပြီး ၄ င်း၏တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ဖြန့်ချိရန်လိုအပ်သောအချိန်ဖြစ်သည်။
DMAA ၏ဝက်ဘဝသည် ၈ နာရီခန့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသူတစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့စုပ်ယူရန်အချိန်အလုံအလောက်ပေးရန်မတိုင်မီ ၈ နာရီမကြာမှီဆေးကိုသောက်သုံးသင့်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီးနောက်ယေဘူယျအားဖြင့်မြင့်မားသည်ဟုခံစားရခြင်းသည်ကြုံတွေ့ရသည်။ များသောအားဖြင့်၊ လူအများစုကအထူးသဖြင့်သူတို့အလုပ်မလုပ်တော့သည့်အချိန်များတစ်လျှောက်လုံးအတွေ့အကြုံရလိုသောခံစားချက်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်စားသုံးပြီးနောက်ကိုယ်ခန္ဓာမှထုတ်ပယ်ရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးမှအချိန်မည်မျှကြာသည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဆေးကိုကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင် ၂၄ နာရီခန့်ကြာအောင်ထားရှိပြီး၎င်းနောက်ခံစားချက်များကိုမခံစားရတော့ပါ။
အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းအတွက် DMAA ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ဖြစ်နိုင်သည်မှာသင်သည် DMAA ၏ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းနိုင်စွမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒဏ္sာရီများနှင့်အချက်အလက်များစွာကိုကြားဖူးပြီး၎င်းတို့အနက်မည်သည့်အရာသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ကိုသင်သိလိုပေသည်။ ကောင်းပြီ, ဒီကိစ္စကို၏အချက်မှာ DMAA ဖြည့်စွက်နည်းလမ်းများအားဖြင့်သင်အလေးချိန်သိသိသာသာပမာဏကိုသွန်းလောင်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ပထမ ဦး စွာ၊ Dimethylamylamine ဖြည့်စွက်ဆေးသည်သင့်အားနာကျင်မှုနှင့်စွမ်းအင်အပေါ်သင်၏သည်းခံနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အထိအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတိုးပွားစေရန်ကူညီနိုင်သည်။ စွမ်းအင်နှင့်နာကျင်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအောင်မြင်စွာတက်ရောက်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
ခန္ဓာကိုယ်အဆီများလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခါ 1,3Dimethylamylamine သည်အထင်ရှားဆုံး thermogenic fat burners တစ်ခုဖြစ်သည်။ နာမည်ကြီးအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြည့်စွက်ဆေးများကဲ့သို့ပင် DMAA သည်အဆီများများလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုအများအားဖြင့်ပုံမှန်ထက်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်၊
မင်းတွေးနေတယ် dmaa ဘာလုပ်သလဲ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်အဆီများကိုလောင်ကျွမ်းရန်အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ကောင်းပြီ၊ DMAA သည်သင်၏သွေးစီးဆင်းမှုကိုကန့်သတ်သည့် vasoconstriction - သင်၏စွမ်းအင်ကိုတိုးစေသည်။ ကန့်သတ်ထားသည့်သွေးစီးဆင်းမှုသည်ကြွက်သားများကြီးထွားခြင်းနှင့်ကြွက်သားများတိုးပွားစေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်၌, သင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း, ခန္ဓာကိုယ်အဆီအမြန်နှင့်ပိုမိုထိရောက်သောမီးလောင်ရာမှ ဦး ဆောင်
DMAA, ephedrine နှင့် amphetamines တို့၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်တူညီမှုများစွာရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော DMAA သည်လူ့ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီး ဦး နှောက်ကို norepinephrine ထုတ်လွှတ်စေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ alpha နှင့် beta receptors များကို noradrenaline လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးပွားစေပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့် adrenergic receptor system ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
လုပ်ရပ်နှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် adipose တစ်ရှူးများမှအဆီပြိုကွဲခြင်းများကိုဖြစ်စေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို lipolysis ဟုခေါ်သည်။
၎င်းသည်ကဖိန်းဓာတ်ကဲ့သို့သောအခြားလှုံ့ဆော်မှုရှိသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအသုံးပြုပါက DMAA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူအသုံးပြုပါက DMAA ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းသည် ၃၅% အထိတိုးလာပြီးအဆီလောင်ကျွမ်းမှုစွမ်းရည်သည် ၁၆၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးလာသည်။
အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့် DMAA ၏ထိရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၄ င်း၏နေ့စဉ်ဖြည့်စွက်ဆေးတစ်ဘူးကို ၁၄ ရက်ကြာသောက်သုံးခဲ့ကြသောကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူကြီး ၃၂ ဦး သည်သိသိသာသာအဆီဆုံးရှုံးမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနည်းတူ DMAA သည်စော်ကားခံရပါကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်သည်။ ဤတွင်ဖြစ်နိုင်ခြေအချို့ရှိပါသည် DMAA ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ:
1. ဦး နှောက်သွေးလွန်
ဦး နှောက်သွေးကြောနှင့် DMAA ကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့်သက်သေအထောက်အထားမရှိသော်လည်းအရက်နှင့်အရက်သောက်သုံးခြင်းပြီးနောက်အခြေအနေကိုတီထွင်ခဲ့သောလူတစ် ဦး ၏ဖြစ်ရပ်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် DMAA ကိုအရက်နှင့်မသုံးသင့်ကြောင်းသတိပြုရန်မှာအရေးကြီးသည်။
အသည်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာအစာခြေလမ်းကြောင်း၏သွေးကို၎င်းအားခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့မသွားမီစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အသည်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကို metabolize လုပ်သည်။
သင် DMAA ဆေးပြားသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်သောအခါအသည်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါး / ဖြည့်စွက်ဆေး၏ပါဝင်မှုကိုကိုင်တွယ်ရမည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အသည်းသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောအင်ဇိုင်းတည်ဆောက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ၎င်းဆေးသည်အသည်းရောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအချိန်ကြာရှည်စွာအသည်းပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
၎င်းသည်လှုံ့ဆော်သူဖြစ်သည်ဟုယူဆသောကြောင့် Dimethylamylamine သည်သွေးပေါင်ချိန်တိုးနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်မြင့်မားသောသွေးဖိအားကိုခံစားနေရသောလူများသည်၎င်းဆေးပါ ၀ င်သည့်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
4. မမှန်သည့်နှလုံးခုန်ခြင်း (နှလုံးမမှန်ခြင်း)
ရံဖန်ရံခါ DMAA ၏လှုံ့ဆော်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လျင်မြန်သောနှလုံးခုန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး၎င်းသည်အခြေအနေမှခံစားနေရသောလူများအတွက်နှလုံးခုန်မြန်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ခွဲစိတ်ရန်စီစဉ်ထားပါကခွဲစိတ်ကုသမှုမတိုင်မီနှစ်ပတ်အလိုတွင် DMAA ကိုမသောက်ရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ သို့မဟုတ်ပါကဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်မမှန်သည့်နှလုံးခုန်ခြင်းကြောင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
DMAA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ Dimethylamylamine ပါ ၀ င်သည့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးတစ်ခုဖြစ်သော OxyELITE Pro သည်အချိုင့်၌ရှိသောနှလုံးအရွယ်အစားနှင့်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူကျန်းမာသောအရွယ်ရောက်သူ ၁၂ ဦး ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ DMAA ၂၅ မီလီဂရမ်ထိုးသောကျန်းမာသောလူကြီးရှစ် ဦး သည်ဆေးသောက်ပြီးနောက်၌ပင်ပုံမှန်နှုန်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်ရှိခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်ဤဆေးကိုသောက်သုံးပါကနှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုမည်သည့်သက်ရောက်မှုမျှမပြပါ။
5. Glaucoma ၏တင်းမာမှု
စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောသက်ရောက်မှုများအပြင် Dimethylamylamine သည်သွေးကြောများအကန့်အသတ်ဖြစ်စေသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အချို့သောဂလူးcomomaအမျိုးအစားများကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင် glaucoma ရှိလျှင်ဆေးသောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
DMAA စားသုံးမှုကြောင့်အသည်းပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အဖြစ်အပျက်များလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်က OxyELITE Pro အားအစားအစာဖြည့်စွက်စာအဖြစ် DMAA ပါဝင်သည့်လူ ၃၆ ဦး သည်အသည်းပျက်စီးမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အသည်းအစားထိုးကုသမှုခံယူပြီးနောက်လူနာနှစ် ဦး သည်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့သည်။
မှတ်သားရန်မှာ ၃၆ ယောက်လုံးသည်အကြံပြုထားသောဆေးကိုသောက်သုံးခဲ့ကြသော်လည်း ၂၇ ခုသည် DMAA အခမဲ့ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်သုံးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဖြည့်စွက်ချက်တွင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဒြပ်ပေါင်းကိုတည်ထောင်ရန်မလွယ်ကူပါ။
7. ဦး နှောက်သွေးထွက်
DMAA ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်သွေးထွက်ခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည်။ တကယ်တော့ DMAA ကိုသုံးပြီးတဲ့နောက် ဦး နှောက်သွေးထွက်နေတဲ့လူသုံးယောက်ကိုအစီရင်ခံခဲ့တယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသားကောင်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအရက်သို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်ဖြင့်ပုံမှန်အသုံးပြုသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအနက်တစ်ခုမှာကျန်းမာသောလူတစ် ဦး သည် Dimethylamylamine ပါ ၀ င်သည့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်သုံးပြီးနောက်တွင် ဦး နှောက်သွေးထွက်ခြင်းနှင့်အတူပြင်းထန်သောခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုစတင်ခံစားခဲ့ရသည်။
Jack22d၊ DMAA ပါ ၀ င်သည့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသုံးပတ်မျှသောက်ပြီးနောက်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၂၂ နှစ်အရွယ်ကျန်းမာသောအမျိုးသားတစ် ဦး ၏အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
DMAA ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရဆေးဝါး (OxyElite Pro) ပါသောဖြည့်စွက်ဆေးများသောက်သုံးခဲ့ကြသူ ၅၆ ဦး အနက် ၁၅% သည်အော့အန်မှုကိုယူပြီးနောက်တွင်အသည်းကိုအန်ထုတ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖြည့်စွက်ချက်တွင်ပျို့အန်ခြင်း၊ အန်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများတွင်တာ ၀ န်ရှိခြင်းရှိမရှိသက်သေအထောက်အထားမရှိခဲ့ပါ။
10 ။ ယာယီအားနည်းချက်
DMAA ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်အကြာစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု (crash) ဖြစ်သည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူအားလုံးသည်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုမခံစားရပါ။
DMAA ၏အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ -
၎င်းသည် DMAA ၏ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူမူးယစ်ဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသီးသန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်လေ့လာမှုများမရှိပါ မူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုအများစုတွင်သီးခြားစီဖြစ်နေသောဆေးအစားအစား DMAA နှင့်အတူအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသူတို့၏ပါဝင်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်သည်။ ဖြည့်စွက်ချက်တွင်ပါ ၀ င်သောဆေးပမာဏကိုတိတိကျကျမသတ်မှတ်နိုင်သေးပါကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် DMAA ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချရန်တိကျမှုမရှိပါ။ အခြားဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ဆိုးကျိုးများမှာ DMAA-based ထုတ်ကုန်များအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသူအချို့သည်နေ့စဉ် ၁၀၀၀ မီလီဂရမ်ထိသောက်သုံးသည်ဟုဆိုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ပုံမှန်သောက်သုံးသောဆေးကိုမှန်မှန်သောက်ပါကအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အချိန်တိုအတွင်းမှန်ကန်သော DMAA သောက်သုံးမှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် 1,3Dimethylamylamine CNS စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ် adrenergic စနစ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့် nootropics နှင့်အတူအသုံးပြုလျှင်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အပေါ်အလွန်ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်အမျိုးမျိုးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားလိုပါက DMAA ကို stimulants (သို့) nootropic နှင့်မပေါင်းစပ်ပါစေနှင့်။
ထို့အပြင် DMAA ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုနေ့စဉ်သောက်သုံးရန်မသင့်ကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ ဒီတော့မှန်ကန်သော Dimethylamylamine သောက်သုံးသောကဘာလဲ?
မှန်ကန်သော dimethylamylamine ဆေးသည်သုံးစွဲသူများ၏အသက်နှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကဲ့သို့သောအချက်များအပေါ်တွင်မူတည်ပြီးအခြားအခြေအနေများတွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လက်ရှိအချိန်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးမှန်ကန်စွာသောက်သုံးရန်လိုအပ်သောသိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များလုံလောက်စွာမရှိသေးပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အဆီ / အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် DMAA ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုဝယ်ယူပါက၎င်းသည်၎င်း၏တံဆိပ်ပေါ်ရှိအသုံးပြုမှုညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပြီးလိုက်နာပါ။ ၎င်းကိုမသုံးမီသင့်ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် DMAA ၏စတင်ထိုးဆေးသည် 10 mg မှ 20mg အထိရှိသည်။ သို့မဟုတ်½သင့်ရွေးချယ်မှု၏ DMAA ပါဝင်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။ ၎င်းသည်ဆေးကိုအပြည့်အဝသောက်လျှင်သင့်အားမည်သည့်ဆေးဝါးကသင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုသိမြင်ရန်နှင့်ခံစားရရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသင်သည်တစ်နေ့လျှင်ဆေးပမာဏ ၄၀ သို့မဟုတ် ၆၀ မီလီဂရမ်အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ ဆေးပမာဏအတိုင်းအတာကိုထောက်ခံသည့်အချက်အလက်များမရှိပါ။
၄ င်းတို့သည် dimethylamylamine ပါဝင်သောထုတ်ကုန်များအတွက်ပုံမှန်ဆေးညွှန်းများဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးများသည်လက်ရှိစျေးကွက်ရှိ DMAA ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများပေးသောအသုံးပြုမှုအကြံပြုချက်များမှရရှိသည်။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိလိုပါကနေ့စဉ်နေ့တိုင်း DMAA ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။ DMAA ဖြည့်စွက်ဆေးအများစုသည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်အထိအများဆုံးအသုံးပြုသည်။ ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုထိုကဲ့သို့သောကြိမ်နှုန်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ်မှီခိုမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်သင်လွယ်ကူစွာစီမံနိုင်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီမိနစ် ၃၀ ခန့်စွမ်းအင်သို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ DMAA ဆေးပြားကိုအသုံးပြုပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်အချို့ကိုရှောင်ရှားနိုင်လိမ့်မည် ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ.
ကမ္ဘာ့အရောင်းရဆုံးအဆီအများဆုံးသောဆေးဝါး ၄ မျိုး
ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောအစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုကိုအထောက်အကူပြုသောဆေးဝါးအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အဆီလောင်ကျွမ်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်လူတစ် ဦး ၏စွမ်းအင်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်စွမ်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအမည်နှင့် CAS နံပါတ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
Synephrine အမှုန့် -CAS: 94-07-5 Synephrine အမှုန့်သည် beta-agonist ဖြစ်ပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်း၊
1,3-dimethylamylamine (DMAA အမှုန့်) - CAS 13803-74-2 Ephedrine ၏ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ 1,3-dimethylamylamine သည်ဒြပ်အာရုံကြောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ အာဟာရဖြည့်စွက်ဆေးများတွင်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်စွမ်းအင်မြှင့်တင်ရန်ကူညီသည်။
Clenbuterol hydrochloride-CAS 21898-19-1 Clenbuterol ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်သည်အဆီအားအလွန်အကျွံလောင်ကျွမ်းခြင်းအပြင်သွေးပေါင်ချိန်တိုးခြင်းနှင့်နှလုံးကိုပိုမိုအလုပ်လုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းအားဖြင့် thermogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
Salbutamol (Albuterol) - CAS 18559-94-9 Salbuterol အမှုန့်ကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူများနှင့်ကန ဦး အသုံးပြုခဲ့သည် သူတို့ရဲ့အသက်ရှူတိုးတက်စေရန်နာတာရှည်ပိတ်ဆို့အဆုတ်ရောဂါ။ သို့သော်ယခုခေတ်တွင်ဤဆေးသည်အဆီဆုံးရှုံးမှုမြန်ဆန်စေရန်၊ အဆီဆုံးရှုံးမှုကာလအတွင်းကြွက်သားထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရာတွင်ခံနိုင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။
သငျသညျ dmaa သို့မဟုတ်အထက်ပါအဆီလောင်ကျွမ်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကို ၀ ယ်လိုပါက AASraw, com မှလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
၁၊ ၃-dimethylamylamine သည်ကာလတိုမှတ်ဥာဏ်နှင့်တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့တွင်အကျိုးကျေးဇူးများစွာပေးသည်။ သို့သော်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပြီးအခြားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအကြားသွေးပေါင်မြင့်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါနှင့်ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောဆေးကိုလိုက်နာရန်သေချာသင့်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောလိုက်နာသင်ဆိုးကျိုးများမခံစားရလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်၎င်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို DMAA ကိုသာအသုံးပြုခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သောသိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားမရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ အခြားဖြည့်စွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏မရှိခြင်း၌တည်ရှိ၏။
Bloomer RJ1, Farney TM, Harvey IC, Alleman RJ - ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်ဖိန်း၏ဘေးကင်းမှုနှင့် 1,3-dimethylamylamine ဖြည့်စွက်မှု - Hum Exp Toxicol ။ 2013 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ; 32 (11): 1126-36 ။ Doi: 10.1177 / 0960327113475680 ။ Epub 2013 ဖေဖော်ဝါရီ 19 ။
Schilling BK (1), Hammond KG, Bloomer RJ, Presley CS, Yates CR ။ - ယောက်ျားများအားပါးစပ်ဖြင့် 1,3-dimethylamylamine အုပ်ချုပ်မှု၏ဇီဝကမ္မနှင့် pharmacokinetic အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - BMC Pharmacol Toxicol ။ 2013 အောက်တိုဘာ 4; 14: 52 ။ Doi: 10.1186 / 2050-6511-14-52 ။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 1,3ပြီ ၂၄ ရက်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော“ 24-Dimethylamylamine” examine.com ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊
et al Vorce SP ။ Dimethylamylamine - အမ်ဖီတမင်းဆေးအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောခုခံအားစနစ်ကိုဖြစ်စေသောဆေးဖြစ်သည်။ J ကိုစအို Toxicol။ (2011)
Gee P, Jackson S, Easton J. နောက်ထပ်ခါးသီးသောဆေးလုံး - DMAA ပါတီဆေးပြားများမှအဆိပ်သင့်မှု။ NZ Med J ကို။ (2010)
Merck အညွှန်းကိန်း - ဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဝါးနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာစွယ်စုံကျမ်း (စာအုပ်) ။
Lisi A, et al ။ ဖြည့်စွက် andgeranium ရေနံအတွက် methylhexaneamine လေ့လာမှုများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးစမ်းသပ်စအို။ (2011)
Bloomer RJ, et al ။ ၁.၃-dimethylamylamine နှင့်ကဖိန်းဓာတ်တစ်မျိုးတည်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ကျန်းမာသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း အားကစားအားကစား။ (2011)
10521 Views စာ
Reddit & Quora မှ NMN အကြောင်းမေးခွန်း ၁၂ ခု (အလွန်ဆွေးနွေးငြင်းခုံသည်)
Tykerb (231277-92-2) ရင်သားကင်ဆာ caner ၏ရတာဟာလူသတ်သမား
testosterone Cypionate တစ်ခု In-depth ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အဆိုပါထိပ်တန်း 10 testosterone ဟော်မုန်း Ester: သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဖြစ်သော?